Who am I ?? | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » Who am I ??
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 3:33 PM
Posted by မိုးသက် at 3:33 PM Read more
ကိုရင် May 25, 2012 at 4:10 PM
အိုမ်း ကိုရင်.., n ယူ အာ မေ :D
^V^ May 25, 2012 at 4:14 PM
စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ၂ ပတ်နားပြီး
ခန ထပ်နား အုံးမယ် :D :D
ကျားဖြူကြီးက ချစ်စရာလေးကြီး နော် ( လိုချင်တယ် တကောင်လောက် ပို့ပေးပါလားးးးးးးးး)
ဟိုတနေ့က သူငယ်ချင်းတယောက် rolling in the sky လုပ်တာ ဒူးပြဲသွားတယ်တဲ့
panzarphyu May 25, 2012 at 8:12 PM
ရှေ့က တုတ်ချိုချဉ်ကိုင်ပြီး ပျော်နေတဲ့ကလေးပုံ ရိုက်တာကို နောက်ကတစ်ယောက်က သူ့ကို ရိုက်တယ်ထင်ပြီး လက်နှစ်ချောင်းကို အမိအရ လက်မြှောက်ပြီး ထောင်လိုက်သေးတယ်..........:P
ဖြိုးဇာနည် May 25, 2012 at 9:41 PM
Ko Naw(WisdomLife) May 25, 2012 at 10:00 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် May 25, 2012 at 10:40 PM
ရိုက်ချက်တွေလန်းသလို သရုပ်ဆောင်တွေလဲ လန်းပါတယ်
Snow May May 25, 2012 at 10:43 PM
စကိတ်စီးတာ လဲတဲ့ပုံမပြပဲ.. စီးနေတဲ့ပုံတွေချည်း ဖွဘုတ်မှာတင်ထားတော့ ငါ့မောင်လေး တော်တော်စီးတတ်ပါလားလို့ ကြိတ်အားကျနေမိသေးတာ :D :D
စံပယ်ချို May 26, 2012 at 4:36 AM
mstint May 26, 2012 at 5:58 AM
စကိတ်အစီးမတော်ရင် ဒူးပြဲတတ်တယ်။ ခေါင်းမထိခိုက်အောင်တော့ ဂရုစိုက်အုံး မေမြို့မိုးရေ။ ရိုက်ချက်တွေ အားပေးသွားတယ်နော်။
မြတ်ကြည် May 26, 2012 at 9:23 AM
ဪ မောင်နှစ်လုံးနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်လား။ မှတ်ချက်။ ။ ပေါက်စ မပါပဲ ပို့စ် တစ်ပုဒ် ရေးပါ။ :P အစ်မတောင် ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက် အဲဒီကို လာလည်ရင် ကောင်းမလားလို့။
မေမြို့မိုး May 26, 2012 at 10:14 AM
လာခဲ့လေ.အစ်မ... ။ ဘလော့ဂါတွေစုပြီး ဂဲသားရင်းလုပ်တာပေါ့.။ :P
blackroze May 26, 2012 at 9:40 PM
Anonymous May 26, 2012 at 9:52 PM
နားနိုင်သူတွေ နားကြပါ.....ဘေးကကောင်မလေးက ပေါက်စသိရင် နာမည်နော် ဦးလေး
မြသွေးနီ May 29, 2012 at 12:32 AM
ပန်းပုံလေး ရိုက်ထားတာ အရမ်းလှတယ် ရုတ်တရက် ပန်းချီထင်နေတာ..
တွတ်တွတ် June 1, 2012 at 5:17 AM